တရုတ် 512 × 512 အလူမီနီယမ်သေတ္တာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Ruichen
512 × 512 အလူမီနီယံသေတ္တာ
1. အရွယ်အစား： 512*512*64mm
2. အလေးချိန်: 3.94kg
3. မော်ဒယ်: P4/P8
၅။ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လွှင့်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း
PCB ဘုတ်အဖွဲ့ P4mm/P8mm
လေယာဉ်ကိစ္စ အမှုတစ်ခုတွင် 8pcs ကက်ဘိနက်၊ ကိစ္စတစ်ခုတွင် 6pcs အစိုးရအဖွဲ့
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 300W-5v60a ဖြစ်သည်
ယခင်: 500 × 1000-D အလူမီနီယံသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: 640 × 640-A လူမီနီယမ်သေတ္တာ
768 × 768-A လူမီနီယမ်သေတ္တာ
၁၂၈၀ × ၉၆၀ မဂ္ဂနီစီယမ်သေဆုံးမှုအခြေအနေ